Mampahafantatra an’i “Whose Knowledge?”: Ahoana no haha-mpiaradia sy ho vahiny mahafinaritra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Janoary 2019 5:40 GMT
Sary avy amin'ny Whose Knowledge? Lisansa eo araka ny CC BY-NC-SA 4.0
Dikantenin'ny lahatsoratra orizinaly navoaka tao amin'ny bilaogy Whose Knowledge? ary naverina navoaka indray noho ny fiarahamiasa amin'ny Whose Knowledge? ary azo jerena araka ny lisansa CC BY-SA 4.0 ihany koa.
Whose Knowledge? dia faly manolotra: “Ny ahoana ny haha-mpiaradia sy ho vahiny mahafinaritra”, fizarana fahefatra sady farany amin'ny Andiana Fahalalana “Tantaranay, Ny fahalalanay”, niarahan'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina teratany Amerikana ao Kumeyaay sy Shoshone, vondrom-piarahamonina feminista Dalit avy any India sy ny any ampielezana, vondrom-piarahamonina LGBTIQA avy ao Bosnia Herzegovina, ary ireo mpiara-dia amin'ny Whose Knowledge? nanoratra.
Tsindrio raha hitroka ny loharanom-baovao PDF.
Fizarana faha-4: Ny fomba ahafahana miara-dia sy ho vahiny mahafinaritra
Ity torolàlana ity dia mizara soso-kevitra momba ny fomba hahatongavana ho vahiny manan-kaja sy mpiara-manohana ireo vondrom-piarahamonina natao anjorom-bala. Araka ny hianaranao, ny miara-dia dia matoanteny fa tsy toe-javatra. Ny fiarahana miara-dia dia mitaky asa tsy tapaka sy toe-javatra marobe misy fitsapana sy fahadisoana. Miaraka amin'ny zava-misy miverimberina amin'ny fomba fanao mikorontana, hizara lisitra misy firarian-tsoa sy ny zavatra tokony atao sy ny tsy tokony atao izahay rehefa manohana ireo izay tsy dia manana hery sy tombontsoa, amin'ny aterineto na eny ifotony.
Tsindrio ny sary na ato raha hitroka ny loharanom-baovao PDF
Manantena izahay fa hanosika anao hanana herimpo handray anjara, hanao fahadisoana sy hanohy hianatra ny zavatra nozarainay satria manao asa mafy amin'ny fiarahan-dia ianao. Ny mpiara-dia sy vahiny mahafinaritra eto amin'izao tontolo izao dia midika fa hahazo fanohanana mendrika azy ireo mba hanohy ny tolon'izy ireo manokana hanana ny tantaran'izy ireo sy ny fahalalan'izy ireo ho ankasitrahana sy omena lanja ny vehivavy maro kokoa, olona hafa loko, vondrom-piarahamonina LGBTQIA, mponina indizeny ary ny hafa avy any ilabolantany atsimo. Arakaraka ny hijoroantsika amin'ny firaisankina no hahatontosantsika zavatra maro.